Daruur Duufaan Dheer, Dheer Saadaasha Shabakadda
David melguizo | | Saadaasha hawada, Daruuro
Daraasad cusub ayaa soo bandhigtay sida wasakheynta ay u soo saarto duufaanno inaga taga daruuro waara, sii weynaada oo cufnaan badan. Inta lagu guda jiro bisha Nofeembar ee Talaabooyinka Akadeemiyada Qaranka ee Sayniska (PNAS), ayaa daabacay natiijooyin qaarkood oo xiraya dood dheer. Waxay muujinayaan sida wasakhayntu u saamayso kuleylka adduunka. Shaqadani waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta saxnaanta cimilada iyo moodooyinka cimilada.
Baarayaasha badankood sidaas ayey moodayeen wasakheynta hawada wuxuu keenaa daruuro waawayn oo waara oo waara adoo ka dhigaya jihooyinka duufaannada ah kuwo u nugul qulqulka hawada, waxayna sababaan isku xirnaan gudaha ah. Daraasaddan, wuxuu ku arkay in wasakheynta, dhacdo ahaan, ay daruuraha ka dhigeyso mid sii waara laakiin, qaab ka duwan sidii markii hore loo maleynayay, iyadoo hoos loo dhigayo cabirka barafkooda iyo hoos u dhaca tirada guud ee daruurta. Farqigaani wuxuu si toos ah u saameeyaa habka saynisyahannadu u matalaan daruuraha moodooyinka cimilada.
Daraasadani waxay iswaafajineysaa waxa aan maalin walba aragno iyo waxa lagu muujiyo moodooyinka kumbuyuutarka. U fiirsashada waxay muujineysaa daruuro qaab-qaabeeyaComulonimbus) ka sareeya kana weynaada nidaamyada duufaanta ee wata wasakhda, laakiin moodeliyadu had iyo jeer ma muujiyaan qulqulo xoog badan, mahadsanid daraasaddan ayaan aragnaa sababta.
Sirta Nolosha Daruuraha
Daruuraha Anvil ama Comulonimbus oo ku dul yaal aag wasakhaysan
Moodellada saadaaliya cimilada iyo cimilada dib uma dhisaan nolosha daruuraha duufaanka si wanaagsan, maadaama ay iyaga ku metelaan isla'egyo fudud oo ku fashilmay inay sawir buuxa bixiyaan. Dib-u-dhiskan liita wuxuu ku abuuray xaalad wareer cilmi-baarayaasha: "Wasakhowgu wuxuu keenaa daruuraha anvil inay sii dheeraadaan marka loo eego xaaladda cirka oo cad", laakiin waayo?
Hal sabab oo macquul ah ayaa ku wareegsan aerosols (qaybo yaryar oo dabiici ah ama asal ahaan ka soo jeeda aadanaha) oo u adeega aasaas u ah dhibco daruur ah inay ku wareegto hareerahooda. Cirka oo wasakhaysan ayaa leh aerosol badan (qiiqa iyo qiiqa) marka loo eego midka nadiifta ah tanina waxay u tarjumaysaa biyo yar qayb kasta. Wasakhdu waxay soo saartaa dhibco badan, laakiin yar.
Tiro badan oo dhibco yaryar ah ayaa beddelaya astaamaha daruuraha. Muddo dheer ayaa loo haystay in dhibco yaryar iyo kuwa yaryar ay bilaabaan falcelin silsilad ah oo u horseedda daruuro waaweyn oo muddo dheer soconaya halkii ay ka soo degi lahaayeen. Dhibcaha khafiifka ahi waxay keenaan inay biyahaagu kor u kacaan iyagoo baraf qabaya waxayna qaboojintani soo saartaa kuleylka ay dhibcuhu ku jiraan waxayna soo saartaa isbeddel heerkul ah oo dhaliya isu-soo-bax gudaha ah. Iskudhin xoog leh ayaa kicisa dhibco biyo badan, sidaasna waxay ku dhistaa daruurta.
Laakiin cilmi-baarayaashu had iyo goor uma fiirsadaan qulqulka daran ee la xiriira daruuraha waawayn ee sii cimri dherer badan ee ku jira bey'ada wasakhaysan, taas oo muujinaysa inay naga maqnaayeen wax la tixgeliyo.
Si loo xaliyo dhibaatadan, kooxda mas'uulka ka ah daraasaddan ayaa go'aansaday in la isbarbar dhigo duufaannada xagaaga dhabta ah iyo moodooyinka kombuyuutarka soo saaray. Moodelku wuxuu ka koobnaa sifooyinka jireed ee walxaha daruuriga ah iyo sidoo kale awoodda loo leeyahay in lagu fiirsado haddii qulqulka uu sii xoogaysanayo ama jilicsan yahay. Jillooyinka daraasaddan waxay soo degeen 6 bilood.
Convection ma aha dambiilaha.
Xogta waxaa laga soo uruuriyay seddex goobood oo leh heerar kala duwan oo wasakheyn ah, huurka, iyo dabeylaha: Galbeedka kuleylka Baasifigga, koonfur-bari Shiinaha, iyo bannaanka weyn ee Oklahoma. Xogta waxaa laga helay Nidaamka Cilmi Baarista Cimilada ee 'DOE' (US Department of Energy).
Tijaabooyin ayaa lagu qaaday kombiyuutarka 'superusputer' ee PNNL (Pacific Northwest National Laboratory). Jillooyinkan billaha ah ee duufaannada waxay aad ula mid yihiin daruuraha hadda la arkay, iyagoo go'aaminaya in moodooyinka ay dib u curiyeen daruuraha duufaanka.
U fiirsashada moodooyinkaas waxaa la ogaaday in xaaladaha oo dhan, wasakhdu ay kordhiso cabirka, dhumucda iyo muddada daruuraha anvil. Laakiin kaliya laba meelood (kulaylaha iyo Shiinaha) ayaa la arkaa qulqulka ka daran. Oklahoma, wasakheynta ayaa horseedday isqabqabsi nacasnimo leh. Iswaafajin la'aanta waxa ilaa hadda la fikiray waxay soo jeedinaysaa in sababtu aysan ahayn isdhaafsi xoog leh.
Markii ay si faahfaahsan u eegeen sifooyinka dhibcaha biyaha iyo kiristaalo baraf ah oo ku dhex jira daruuraha, kooxda cilmibaadhistu waxay ku soo gabagabeeyeen in wasakhdu soo saartay dhibco yaryar iyo kiristaalo baraf ah, iyadoon loo eegin meesha ay ku yaalliin.
Sidoo kale cirka cad, walxaha barafka ayaa ka culus oo si dhakhso leh uga soo baxa daruuraha anvil, taas oo keenaysa inay si dhakhso leh u kala baxaan. Cirka dhexdiisa wasakhaysan, kristantariyada barafka ayaa ka yaraa oo aad u fudud si loo di'iyo, taas oo abuuraysa daruuro waaweyn oo waara.
Ka qayb qaadashada kuleylka adduunka.
Dhinaca kale, kooxdu waxay ku qiyaastay sida daruuraha duufaanku uga qayb qaataan diirimaad ama qaboojin. Daruurahaasi waxay maalintii qaboojiyaan dhulka hadhkooda laakiin waxay u qabtaan kuleylka sida bustaha habeenkii, iyagoo ka dhigaya habeeno diiran.
Iyadoo la tixgelinayo saameynta wasakheynta daruuraha duufaanka, waxaan fahamsanahay inay saameyn ku yeelan karaan xaddiga diirimaadka ugu dambeeya ee la saadaaliyay dhulka sannadaha soo socda. Sameynta matalaadyo sax ah oo daruuro ah moodooyinka cimilada ayaa fure u ah hagaajinta saxnaanta saadaasha isbeddelka cimilada.
Macluumaad dheeraad ah: Cumulonimbus-ka, Natiijooyin muhiim ah oo ku saabsan cimilada cimilada ee magaalooyinka, Hillaacyada hillaaca ayaa ku sii xoogaysanaya kuleylka adduunka
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Daruuro waaweyn oo muddo dheer soconaya ayaa wasakhaysan
Roobka kulaylaha ee waqooyiga cidhifka woxoogaa, maxaa ugu sii daran?